सी.एस.एस.डी विभाग - nph.nepalpolice.gov.np
नेपाल प्रहरी अस्पताल बि.सं. २०४० सालमा स्थापना भए पश्चात अस्पतालको आवश्यकतानुसार गुणस्तरीय सेवा प्रदान संगसगै बि.सं. २०५८ सालमा यस अस्पतालमा Central Sterile Supply Department (CSSD) संचालनमा ल्याइएको थियो । Central Sterile Supply Department (CSSD)अस्पतालको एक यस्तो महत्वपूर्ण बिभाग हो जहाँ अस्पतालको बिभिन्न वार्ड तथा बिभागहरुमा आवश्यक पर्ने सामानहरु जस्तै Gauze, Cotton, Gloves लगायत निर्मलिकरण गर्नु पर्ने सामानहरु र बिरामीलाई प्रयोग गरिएका
Contaminated सामानहरुलाई Decontamination गरी Sterilization (निर्मलिकरण) गरी आवश्यकतानुसार अस्पतालको सम्पुर्ण वार्ड तथा बिभागहरुमा वितरण गरिन्छ ।
Central Sterile Supply Department (CSSD) शुरु गर्दा दुईवटा कोठा लिई Autoclave Machine -१, In-charge -१सहित केही सहायक कर्मचारी लिएर शुरु गरिएको थियो । अस्पतालको आवश्यकता, बृद्धिबिकास र बिस्तार क्रममा CSSD लाई पनि व्यवस्थित र बिस्तार संगसंगै थप सामान, जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको पनि आवश्यकता र ठाउँ साँघुरो भएकोले २०७३ साल माघ महिनामा नयाँ भवनमा स्थानान्तरण गरियो । आवश्यकतालाई मध्ये नजर गरी यस शाखामा Autoclave Machine पनि थप गरियो । हाल यस शाखामा
दिनहुँ ३ वटा Autoclave Machine संचालनमा आएको व्यहोरा जानकारी गराउदछु । यस शाखामा हाल कार्यरत जनशक्ति,मेशिन/औजार र कार्यहरु निम्नानुसार छन् ।
ईन्चार्ज - १
सहायक – ३
Autoclave Machine – ३
 Preparation: दैनिक रुपमा वार्ड तथा बिभागहरुमा आवश्यक पर्ने Gauze, Cotton, Dressing Pad लगायतका सामानहरु आवश्यक अनुसार तयार पारिन्छ ।
 Collection: बिभिन्न वार्ड तथा बिभागहरुमा बिरामीहरुलाई प्रयोग गरिएको Contaminated सामानहरु collection गरिन्छ ।
 Cleaning: बिभिन्न वार्ड तथा बिभागहरुबाट बिरामीलाई प्रयोग गरिएका contaminated instrument हरुलाई decontamination गराई सफा गरिन्छ ।
 Packing: सफा पारिएका सामानहरुलाई सुख्खा बनाई बिभिन्न Set हरु packing गरी autoclave को लागि तयार पारिन्छ ।
 Autoclave: Packing गरि तयार पारिएका सामानहरु निर्मलिकरणको लागि Autoclave गरिन्छ ।
 Checking: निर्मलिकरण गरिएका सामानहरु राम्रोसंग autoclave भए नभएको चेकजाँच गरिन्छ ।
 Supply: बिभिन्न वार्ड तथा बिभागहरुमा आवश्यकतानुसार सामानहरु बितरण गरिन्छ ।